एमाले र माओवादीका लागि उपेन्द्र यादव नै सत्तामा किन चाहिए ?- डा. सुरेश आचार्य - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
एमाले र माओवादीका लागि उपेन्द्र यादव नै सत्तामा किन चाहिए ?- डा. सुरेश आचार्य
२०७४ फागुन २४ बिहीवार
ओली सरकार गठनको तीन साता हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । चुनाव सम्पन्न गराउने प्रयोजनका लागि देउवा सरकारले केही समय लिँदा निर्वाचित सरकारलाई अवसर नदिएको आरोप लगाउनमै एमाले नेताहरूले समय खर्चिए । तर निर्वाचनको तीन महिनाअघि नै पार्टी एकतामा जाने वाचा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले पनि एक हुन सकेका छैनन् । यही कारण मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा विभाजित छ । एउटै पार्टी बनाइरहँदा मन्त्रालयको दलगत विभाजनमै उनीहरू अल्मलिएका छन् ।
तर सरकारले पूर्णता नपाउनुको दोष एमाले र माओवादी नेताहरूले उपेन्द्र यादवलाई लगाइरहेका छन् । सरकारको स्थायित्वका लागि उपेन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थिति जरुरी छैन । दुई मन्त्रालय मागेर सत्ता साझेदार हुन तयार देखिएको संघीय समाजवादी फोरमलाई एक मन्त्रीमा मनाउने कसरतमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका थिए । कुरा मिल्दै गरेको भनिइरहँदा उनको माग तीन मन्त्रालयमा उक्लेको छ । फोरमका तर्फबाट उपराष्ट्रपति वा उपसभामुखसम्मको माग मुखरित भएको खबर आएका छन् ।
यी खबर सत्य हुन् भने उपेन्द्र यादव सत्तामा समाहित हुने कारणले सरकारले पूर्णता नपाएको भन्नु नागरिकलाई मूर्ख बनाउने प्रयत्न हो । मूलतः मन्त्री छान्ने एकाधिकार पाएका एमाले अध्यक्ष ओली आफैं मन्त्रीहरू खटाई खटाई नियुक्त गरिरहेका छन् । एमालेभित्र भन्दा ठूलो सकस माओवादीभित्र रहेको अनुमान गर्न किन पनि कठिन छैन भने अहिले जो मन्त्री भए, उनीहरू हिजो पार्टी छाडेर फेरि फर्किएकाहरू मात्रै छन् । पार्टीमा टिकेका र पार्टीका लागि काम गरेकाहरू फेरि पनि बाहिरिने अवस्था छ । सारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आएको अवरोध स्थायी सरकार दिने चाहनाले एक ठाउँमा उभिएका दुई दलबीचको सकस हो ।
एमाले र माओवादीका लागि उपेन्द्र यादव नै सत्तामा किन चाहिए ? सरकार बन्ने कसरत चलिरहँदा आमनागरिकका मनमा यो प्रश्न उब्जिएको छ । एमाले माओवादीलाई देउवा सरकार रहँदै सरकार बनाउने सहमतिमा पुग्न कसैले रोकेको थिएन । ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा कोही कसैमा द्विविधा र शंका छँदै थिएन । आवश्यक मन्त्रणाका लागि छिमेकी मित्रलाई भावी प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले उतिबेलै निम्तो दिएर भेटघाटको क्रम पनि सकेकै थिए । सम्भवतः आवश्यक सुझाव प्राप्त भएकै थियो । उनका लागि मन्त्रालयका नामाकरण र संख्या निर्धारण गर्न अनुभवी कर्मचारीतन्त्रको अभाव थिएन । सत्तारोहण गर्नै लागेको दललाई सघाउन पूरै सरकारी संयन्त्र बालकोटमा हाजिर हुन तयारै थियो । र, पनि उपेन्द्र यादवलाई कुरेर प्रधानमन्त्री ओली किन बसिरहे ?
यसका दुई कारण हुन सक्छन् ।
पहिलो कारण, छिमेकी मित्रको आगमन समयभन्दा अघि भयो । उसबेला उपेन्द्रको आवश्यकता छिमेकीले अनुभव गर्न पाएकै थिएन । हुन सक्छ, अहिले दूरभाष सन्देशका आधारमा प्रधानमन्त्री ओली उपेन्द्रलाई सत्तारोहण गराउनुपर्ने कसरतमा लाग्न बाध्य भएका छन् । दोस्रो कारण हुन सक्छ– एमाले माओवादीमा अधिनायकवादको दम्भ चढेको छ । यो दम्भलाई संविधानमा भएको दुई तिहाइको प्रावधानले रोक्छ । दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार बनाउँदा संविधानमा चाहे जस्तो परिवर्तन र संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई महाभियोगको त्रासमा राखेर आफूखुसी शासन गर्न पाइने छ । अन्यथा दुई तिहाइ बहुमत नभएका कारण सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नुको कुनै कारण छैन । सामान्य बहुमतबाटै सरकार बन्छ । कथं बहुमत भएन र माओवादीले साथ नदिएको हुन्थ्यो भने पनि एमाले एक्लैलाई अल्ममतको सरकार बनाउने सुविधा थियो । भलै त्यस अवस्थामा प्रचण्डले बहुमतको मिलीजुली सरकार बनाउने खतरा रहन्थ्यो ।
सरकार छाड्न देउवामाथि दबाब नै सिर्जना गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । तर बितेका अढाई महिना खासगरी एमालेले आफ्नो ऊर्जा गलत ठाउँमा प्रयोग ग¥यो । अहिले उसलाई अनुभूति भएको हुनुपर्छ, सरकार छाड्न दबाब दिनु जति सजिलो सरकार बनाउन होइन रहेछ । हिजो उनै प्रचण्डको साथ लिएर ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । अहिले उनै प्रचण्डलाई एउटै पार्टीका कमरेड हौं भनेर हिँडिरहँदा सरकार बनाउन किन यति ठूलो सकस भएको छ रु समयले यसको उत्तर अवश्य दिने नै छ ।
तरुण खबरका लागि डा .सुरेश आचार्यको लेख!